ပရဈကွျော မစားဖွဈတော့တဲ့ အကွောငျးရငျးကိုပွောပွလာတဲ့ ဦးဇငျးတဈပါး – Cele Myanmar
Home > တရားအဆုံးအများ / ဗဟုသုတ
ငရဲကွီးရှဈထပျမှာ နာကငျြမှုဝဒေနာငရဲဘုံဆိုတာရှိပါတယျ။ သူတို့ ခံစားနရေတဲ့ ဝဋျဒုက်ခတှဟော လကျရှိလူတှေ စားနတေဲ့ ပုရဈတှရေဲ့ ဘဝနဲ့ ဆငျတူပါတယျ။ ပုရဈကွျောကို ကြှနျတျောလဲ အရငျကအရမျးကွိုကျခဲ့ပါတယျ။ နယျပွနျတော့ ကွျောပုံကွျောနညျးအဆငျ့ဆငျ့တှကေို သိလိုကျရပွီးနောကျပိုငျး လုံးဝမစားဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတော့တယျ။
အရမျးစားကောငျးတယျ၊ အရမျးလတျဆကျတယျဆိုတာ ညှငျးပနျးနှိပျစကျပွီးမှ သရေတာဖွဈလို့ ပိုပွီး လတျဆတျ ပိုစားကောငျး ခံတှငျးမွိနျစတောပါ။ ပုရဈကို အရငျဆုံး ရသေနျ့ဗူးထဲ ကောကျကောကျထညျ့ပါတယျ။ ရသေနျ့ဗူးထဲမှာ ရအေနညျးငယျထညျ့ထားပါတယျ။ အဲတော့ သူတို့တှဟော မသသေေးပါဘူး။ ဗူးထဲမှာဖွဈတဲ့အတှကျ လကေောငျးကောငျးမရတဲ့အတှကျ မြော့မြော့လေးသာ ရှိနပေါတယျ။
အဲဒီမြော့မြော့ လေးရှိနပေမေယျ့ နာကငျြမှု အသိစိတျတော့ ကောငျးကောငျးသိနရေပါသေးတယျ။ အဲလို အသကျရှုကွပျပွီး မြော့နတေဲ့အတှကျ ဗူးထဲကနေ အပွငျကို သူတို့ကို ထုတျတဲ့အခါ သူတို့ဟာ မပွနျနိုငျ မလှုပျရှားနိုငျတော့ပါဘူး။အောကျစီဂငျြအရမျးနညျးတဲ့ ဗူးအတှငျးမှာ အခြိနျကွာကွာနရေလို့ပါပဲ။
အပွငျရောကျတာနဲ့ မြော့မြော့လေးပဲရှိနသေေးတဲ့ တဈကောငျးခငျြးစီတိုငျးရဲ့ အစာအိမျတှကေို ကွကျသှနျဖွူတှသှေပျနတေဲ့အထိ သူတို့တှဟော ဝဒေနာကို ပူထူနအေောငျ ခံစားသိရှိနရေတုံးပါပဲ။ အရှငျလတျလတျ ခွထေောကျတှဖွေတျ လကျတှဖွေတျလဲ ခံရပါတယျ။ အဲလိုဖွတျခံထားရတဲ့အထိ နာကငျြမှုတှေ ကို သိနရေဆဲပါ။
နောကျဆုံးဆီပှကျပှကျဆူးနတေဲ့ အိုးထဲ တဈကောငျပျေါတဈကောငျဆငျ့နတေဲ့အထိ အသိစိတျမှာ နာကငျြမှု တှေ ပူလောငျမှုတှေ ကွောကျရှံနမှေုတှေ ဖွဈလို့နပေါတယျ။ အကူညီမဲ့စှာနဲ့ ကွောကျစိတျတှနေဲ့ ဘယျလိုမှ မလှတျမွောကျနိုငျတော့ဘူး သပှေဲဝငျရတော့မယျဆိုတာလဲ သိပွီး ထိနျ့လနျ့နပေုံပါပဲ။
အပျေါအောကျ လှမျးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ သူတို့ရဲ့နာကငျြမှုတှဟော အပွီးတိုငျး ရပျတနျ့လို့ သှားခဲ့ပါပွီ။ ကွကျတို့ ငှကျတို့ ငါးတို့ တို့ဆိုရငျ တဈခါ ကိုငျရိုကျလိုကျတာနဲ့ ဝဒေနာခဏတာခံစားရတဲ့ သဆေုံးမှုမြိုးပါ။
ပုရဈတှရေဲ့ဘဝမှာတော့ ဝဒေနာတှကေို အဆငျ့ဆငျ့ မရှုနိုငျမကယျနိုငျလောကျအောငျ ခံစားပွီးမှ သဆေုံးမှုမြိုးဖွဈတဲ့အတှကျ ကြှနျတျော အရမျးကွိုကျနရေငျတောငျ ဘယျလိုမှ မွိုမကနြိုငျတော့ပါဘူး။
တဈကောငျးခငျြးစီရဲ့ နာကငျြမှုဝဒေနာတှေ အကောငျမွောကျမြားစှာရဲ့ နာကငျြမှု ဒုက်ခတှကေတော့ အရမျးဝဋျကွီးလှနျးလှပါတယျ။ လူတှရေဲ့ အာဟာရကွောငျ့ တိရစ်ဆာနျတှကေို စားသုံးပေးရတယျဆိုပမေယျ့လဲ ညှငျးပနျးနှိပျစကျ ခံစားစပွေီးမှ စားရမယျ့ အစာမြိုးဆိုရငျတော့ မစားရလဲ ပွဿမရှိပါဘူး။
လူပဲဖွဈဖွဈ တိရစ်ဆာနျပဲဖွဈဖွဈ အသိဉာဏျရှိရှိ အသိဉာဏျမရှိရှိ နာကငျြမှုဝဒေနာကိုတော့ သတ်တဝါတိုငျး ကောငျးကောငျးခံစားနားလညျသိရှိနိုငျပါတယျ။ တဈခြို့လူတှကွေပွနျတော့လဲ နာကငျြခံစားရတယျဆိုတာ သိသိကွီးနဲ့ကို အရသာခံပွီး မွိနျရညျလြှကျရညျကိုစားသုံးကွပါတယျ။စားရလေ ပိုငတျလေ၊ ရလာလလေေ ပိုလိုခငျြလလေပေါပဲ ၊ ဒါကလဲ သူတို့ အရငျဘဝက မကောငျးတဲ့ အကုသိုလျကံတှေ မြားခဲ့တဲ့အတှကျကွောငျ့ပါပ
သတ်တဝါမြားအားလုံး အသကျဘေးမှ လှတျမွောကျကွပါစေ ဆန်ဒပွုရငျး . . .
Credit: အညတရ အရှငျသောပါကမွိုငျ
ပရစ်ကြော် မစားဖြစ်တော့တဲ့ အကြောင်းရင်းကိုပြောပြလာတဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါး
ငရဲကြီးရှစ်ထပ်မှာ နာကျင်မှုဝေဒနာငရဲဘုံဆိုတာရှိပါတယ်။ သူတို့ ခံစားနေရတဲ့ ဝဋ်ဒုက္ခတွေဟာ လက်ရှိလူတွေ စားနေတဲ့ ပုရစ်တွေရဲ့ ဘဝနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ပုရစ်ကြော်ကို ကျွန်တော်လဲ အရင်ကအရမ်းကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ နယ်ပြန်တော့ ကြော်ပုံကြော်နည်းအဆင့်ဆင့်တွေကို သိလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်း လုံးဝမစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
အရမ်းစားကောင်းတယ်၊ အရမ်းလတ်ဆက်တယ်ဆိုတာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးမှ သေရတာဖြစ်လို့ ပိုပြီး လတ်ဆတ် ပိုစားကောင်း ခံတွင်းမြိန်စေတာပါ။ ပုရစ်ကို အရင်ဆုံး ရေသန့်ဗူးထဲ ကောက်ကောက်ထည့်ပါတယ်။ ရေသန့်ဗူးထဲမှာ ရေအနည်းငယ်ထည့်ထားပါတယ်။ အဲတော့ သူတို့တွေဟာ မသေသေးပါဘူး။ ဗူးထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လေကောင်းကောင်းမရတဲ့အတွက် မျော့မျော့လေးသာ ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီမျော့မျော့ လေးရှိနေပေမယ့် နာကျင်မှု အသိစိတ်တော့ ကောင်းကောင်းသိနေရပါသေးတယ်။ အဲလို အသက်ရှုကြပ်ပြီး မျော့နေတဲ့အတွက် ဗူးထဲကနေ အပြင်ကို သူတို့ကို ထုတ်တဲ့အခါ သူတို့ဟာ မပြန်နိုင် မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပါဘူး။အောက်စီဂျင်အရမ်းနည်းတဲ့ ဗူးအတွင်းမှာ အချိန်ကြာကြာနေရလို့ပါပဲ။
အပြင်ရောက်တာနဲ့ မျော့မျော့လေးပဲရှိနေသေးတဲ့ တစ်ကောင်းချင်းစီတိုင်းရဲ့ အစာအိမ်တွေကို ကြက်သွန်ဖြူတွေသွပ်နေတဲ့အထိ သူတို့တွေဟာ ဝေဒနာကို ပူထူနေအောင် ခံစားသိရှိနေရတုံးပါပဲ။ အရှင်လတ်လတ် ခြေထောက်တွေဖြတ် လက်တွေဖြတ်လဲ ခံရပါတယ်။ အဲလိုဖြတ်ခံထားရတဲ့အထိ နာကျင်မှုတွေ ကို သိနေရဆဲပါ။
နောက်ဆုံးဆီပွက်ပွက်ဆူးနေတဲ့ အိုးထဲ တစ်ကောင်ပေါ်တစ်ကောင်ဆင့်နေတဲ့အထိ အသိစိတ်မှာ နာကျင်မှု တွေ ပူလောင်မှုတွေ ကြောက်ရွံနေမှုတွေ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ အကူညီမဲ့စွာနဲ့ ကြောက်စိတ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူး သေပွဲဝင်ရတော့မယ်ဆိုတာလဲ သိပြီး ထိန့်လန့်နေပုံပါပဲ။
အပေါ်အောက် လှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေဟာ အပြီးတိုင်း ရပ်တန့်လို့ သွားခဲ့ပါပြီ။ ကြက်တို့ ငှက်တို့ ငါးတို့ တို့ဆိုရင် တစ်ခါ ကိုင်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ဝေဒနာခဏတာခံစားရတဲ့ သေဆုံးမှုမျိုးပါ။
ပုရစ်တွေရဲ့ဘဝမှာတော့ ဝေဒနာတွေကို အဆင့်ဆင့် မရှုနိုင်မကယ်နိုင်လောက်အောင် ခံစားပြီးမှ သေဆုံးမှုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်နေရင်တောင် ဘယ်လိုမှ မြိုမကျနိုင်တော့ပါဘူး။
တစ်ကောင်းချင်းစီရဲ့ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေ အကောင်မြောက်များစွာရဲ့ နာကျင်မှု ဒုက္ခတွေကတော့ အရမ်းဝဋ်ကြီးလွန်းလှပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အာဟာရကြောင့် တိရစ္ဆာန်တွေကို စားသုံးပေးရတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ခံစားစေပြီးမှ စားရမယ့် အစာမျိုးဆိုရင်တော့ မစားရလဲ ပြဿမရှိပါဘူး။
လူပဲဖြစ်ဖြစ် တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသိဉာဏ်ရှိရှိ အသိဉာဏ်မရှိရှိ နာကျင်မှုဝေဒနာကိုတော့ သတ္တဝါတိုင်း ကောင်းကောင်းခံစားနားလည်သိရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေကြပြန်တော့လဲ နာကျင်ခံစားရတယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ကို အရသာခံပြီး မြိန်ရည်လျှက်ရည်ကိုစားသုံးကြပါတယ်။စားရလေ ပိုငတ်လေ၊ ရလာလေလေ ပိုလိုချင်လေလေပါပဲ ၊ ဒါကလဲ သူတို့ အရင်ဘဝက မကောင်းတဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေ များခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။
သတ္တဝါများအားလုံး အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ကြပါစေ ဆန္ဒပြုရင်း . . .
Credit: အညတရ အရှင်သောပါကမြိုင်